August 19, 2019 - Myitter
မီတာခတွေ ဈေးတက်လို့ ဖာခံထွက်နေရပီဆိုတဲ့ကောင်မလေး
August 19, 2019 Myitter 0
အွန်လိုင်းပေါ်မှာ လူကြည့်များနေတဲ့ မီတာခတွေ ဈေးတက်လို့ ဖာခံထွက်နေရပီဆိုတဲ့ကောင်မလေး ယခုတစ်လော အွန်လိုင်းပေါ်မှာ လူကြည့်များနေတဲ့ ရုပ်သံလေးတစ်ခုကတော့ မီတာခတွေ ဈေးတက်သွားလို့ စနောက်ပီးရိုက်ထားတဲ့ ဗွီဒီယိုဖိုင်လေး ဖြစ်ပါတယ်….. လမ်းပေါ်မှာ လျှောက်သွားနေတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကို ကောင်လေးတစ်ယောက်က မေးလိုက်ပါတယ်……. နင်တစ်ယောက်ထဲ ဘာလုပ်တာလဲ….ကောင်မလေးက ပြန်ဖြေလိုက်ပါတယ်…..မီတာခတွေ ဈေးတက်နေတာ နင်မသိဖူးလား …တဲ့ […]
လျှပ်စစ်မီတာခ နှုန်းထားကြောင့် “သီတဂူ ရေအလှူတော်နှင့် လျှပ်စစ်မီတာခ”ကို သီတဂူဆရာတော်ကြီး မှ မိန့်ကြားတော်မူပြီ…
ပြောင်းလဲသတ်မှတ်လိုက်သော လျှပ်စစ်မီတာခ နှုန်းထားကြောင့် “သီတဂူ ရေအလှူတော်နှင့် လျှပ်စစ်မီတာခ”ကို သီတဂူဆရာတော်ကြီး မှ မိန့်ကြားချက် စစ်ကိုင်းတောင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ ရဟန်း၊ သာမဏေ၊ သီလရှင်၊ ယောဂီ အရေအတွက် ၁၄၀၀၀ ကျော်၊ ကျောင်းတိုက်ပေါင်းထောင်ကျော်ကို နေ့တိုင်း သီတဂူရေအလှူတော် စီမံကိန်းဖြင့် ရေပေးလှူလျှက်ရှိပါသည်။ သီတဂူရေအလှူတော်-၁၉၈၀ ခုနှစ်မှာစတင် (၃၉-နှစ်ခရီး)-ရေစက်ရုံသုံးရုံ၊-မြင်းကောင်ရေ-၅၀ […]
( ၁၇.၈.၂၀၁၉ )မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်(၃) ဖွဲ့နှင့် တပ်မတော်အကြားတိုက်ပွဲ ပြင်းထန်
၁၈.၈.၂၀၁၉ ကွတ်ခိုင်မြို့နယ် နမ့်ကွတ်ကျေးရွာ တွင် ( ၁၇.၈.၂၀၁၉ )မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်(၃) ဖွဲ့နှင့် တပ်မတော်အကြားတိုက်ပွဲ ပြင်းထန်လျက်ရှိသည်။ ယနေ့(၁၈.၈.၂၀၁၉ )တွင် နမ့်ကွတ်ကျေးရွာတွင်တိုက်ပွဲ(၃)ကြိမ်တိုင်တိုင် ပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ၎င်းတိုက် ပွဲတွင် တစ်ဖက်နှင့်တစ်ဘက် လက်နက်ကြီးငယ် နှင့် ပြစ်ခိုက်မှုများဖြစ်နေပြီး ယခုလက်ရှိအခြေအနေအရ နမ့်ကွတ် ကျေးရွာမှ သက်ကြီးရွယ်အိုများနှင့် ကလေးသူငယ်များအား […]
ချုံပုတ်အတွင်း အမျိုးသမီးတစ်ဦး အဝတ်ဗလာဖြင့် သေဆုံးမှုမှ ပြုကျင့်သူကို ဖမ်းမိ
ကျောက်တံခါးမြို့နယ်တွင် ဖခင်ထံဟင်းပို့သွားသည့်အိမ်ထောင်သည်အမျိုးသမီးတစ်ဦး ချုံပုတ်အတွင်းအဝတ်ဗလာဖြင့် သေဆုံးနေမှုမှ အဓမ္မပြုကျင့်သူကိုရဲတပ်ဖွဲ့က သြဂုတ် ၁၅ရက်တွင် ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည်။ ဩဂုတ် ၅ ရက်နံနက် ၄ နာရီအချိန် ကျောက်တံခါးမြို့နယ် သံပုရာခုံကျေးရွာအုပ်စု သူဌေးကြီးကျေးရွာတွင် အမျိုးသမီးတစ်ဦး သေဆုံးနေကြောင်းသတင်းအရ ပဲနွယ်ကုန်းနယ်မြေရဲစခန်းမှ ရဲအုပ် ဇော်လွင် နှင့်အဖွဲ့က သက်သေများနှင့်အတူ သွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့သည်။ သေဆုံးသူမှာသူဌေးကြီးကျေးရွာအုပ်စုနေ […]
ဂုတ်တွင်းမှာ ပိတ်မိနေလို့ စားရိတ်ပြတ်လုမတတ် ဖြစ်နေတဲ့ ကားသမားတွေအပေါ် ရိုက်ချက်ပြင်းလှတဲ့ ထမင်းဆိုင်….
မိုးလေးတဖွဲဖွဲကျနေတဲ့မနက် အာရုံတက်မှာ ဂုတ်တွင်းပတ်ပတ်လည်တွင် မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ် 3ဖွဲ့နှင့် တပ်မတော်တို့ အပြန်အလှန် ပစ်ခက် တိုက်ခိုက်နေ၍ ခရီးသည်များနှင့် ကုန်တင်ယာဉ်ကြီးများ သွားလာ၍မရဖြစ်နေသည်။ ခရီးသည်များနှင့် ကုန်တင်ယာဉ်ကားဆရာများဒုက္ခရောက်နေချိန် မိုးမြင့်သာထမင်းဆိုင်သည်သာ ကားဆရာများနှင့် ခရီးသည်တို့အတွက် အားထားမှီခိုရာ နေရာတခုဖြစ်ခဲ့သည်။ အိမ်သာနှင့်ရေချိုးစရာတို့မှာ အဆင်ပြေလှပါသည်။ သို့အတွက်ကြောင့်လဲ ကျေးဇူးတင်မိပါသည်။ ဂုတ်တွင်းမှာ ပိတ်မိနေလို့ […]
“အမေ လက်တင်ပီးတော့ အလေးပြုတယ် အမေမျက်ရည်ကျပေမဲ့အမေပြုံးနေမှာပါ”တဲ့လား အန်တီ
“အမေ လက်တင်ပီးတော့ အလေးပြုတယ် အမေမျက်ရည်ကျပေမဲ့အမေပြုံးနေမှာပါ”တဲ့လား အန်တီ နိုင်ငံအတွက် အသက်ပေးလှူသွားတဲ့ သားကိုအမေဖြစ်သူက မျက်ရည်များနဲ့အတူဒီလိုလေး ဖြေသိမ့်သွားရှာတယ် … အမေ့သားလေး ပျော်ပါစေငြိမ်းချမ်းပါစေ အေးချမ်းတဲ့ ဘုံဗိမာန်ရောက်ပါစေတဲ့ … သားကိုစစ်တပ်ထဲထည့်လို့အမေ့ကိုလည်း အပြစ်မမြင်ပါနဲ့ သားရယ်တဲ့ သားအဖေကလည်းလေခြေထောက်တဖက်ပြတ်လည်း ပြုံးပြုံးပဲတဲ့သိလား ခြေထောက်တဖက်ပြတ်တာတောင်သေနတ်ကောက်ပီးတော့ ရန်သူကိုလိုက်ပစ်တာ သိလားသူရဲကောင်းကြီးတဲ့ … […]